Abafazi be-Olympic Skaters - Abani Abangcono Kakhulu?
Iingcali zeeNkwenkwezi kunye neZenzo zeZakhono zokuKhusela kwii-Olimpiki
Ngama-1990, uphando lwelizwe olubizwa ngokuba yi-skating skating njengemidlalo yesibili yaseMelika eyaziwayo, kunye nebhola lebhola elifumana kuphela iivoti ezingaphezulu. Iziganeko zezemidlalo zokuzikhusela ziphakathi kwezona zikhangeleke kakhulu kubabukeli be-Olimpiki. Abantu abadala bayawuthanda ukudibanisa ubabalo kunye nezemidlalo. Abantwana - ingakumbi amantombazana amancinci - aphuphe ikusasa njengeenkwenkwezi zokudweba.
Izambatho ezinamafutha kunye nomdaniso uhamba kunye neendlela ezinamandla zokwenza iziganeko zokukhawulela.
Iziganeko zokubhinqa kunye neengqungquthela zomdaniso zibonisa abafazi kunye namadoda ngokubambisana kwiqhwa. Ukwandisa, abafazi bajikelezisa i-skaters bakhuthaza abaphulaphuli.
Imigangatho emithathu apho amagosa aseOlimpiki asekuqaleni ayigweba ukuba isiganeko sasifanelekile ukuba "abafazi" bebuhle, ifom nokubonakala. Kodwa ekuqaleni kwe-Olympic figure skating history, ngaphambi kokuba uSonja Henie aqalise ukuhamba kwe-ballet, kwaye ngoku kutshanje, umdlalo wezemidlalo wabasetyhini waba nesibheno esinamandla. Ukususela ngo-1960, i-skating ye-skating ye-women, ukugxininisa isantya, amandla kunye namandla, ifakiwe kwii-Olimpiki. Ngelixa lingazange lithandwe njengemifanekiso yokukhawulela, ukugqweswa kwe-skating skating sekhasi kuye kwanda.
Ngaba ukuthandwa kwabalingani bebhinqa kubonisa ukuba iimeko zesini zesini ziphila kwaye kakuhle - ukuba abadlali beentombi basamkelekile xa behambelana ngokunyanisekileyo kwiimbambano zesintu? Okanye ngaba ithetha ukuba abantu abaninzi banomdla kwizemidlalo ezingahambi ngokukhawuleza, amandla kunye nobudlova obuncinane?
Amanqabana ehlabathini labesetyhini anemihla yokukhwela nge-1902, xa uMadge Syers waseBrithani Great engena kwi-World Championship Champions kwaye wagqiba sesibini - nje emva kweSweden skater skate, u-Ulrich Salchow. Kodwa amagosa, ababengalindelanga abafazi abaza kulo mcimbi, baza baqhawula abafazi kwiiqhankaso zehlabathi.
Ngomnyaka we-1905, umcimbi wezemidlalo wabasetyhini owahlukileyo waqaliswa, kwaye uSyers uzuze ukuphanga-mbini kokuqala kwonyaka.
Abafazi be-Olympic Figure Skaters
Amanye amabhinqa ama-Olympic figure skaters ufanele ukwazi:
USonja Henie : "I-Pavlova kwiqhwa" yaseNorway yazisa i-ballet iya kwindlela yokuzonwabisa. Waya eHollywood waza wabuyela kwi-revue yeqhwa, ebeka umgangatho osemva kamva kubakho iqela lezemidlalo elilandelwayo.
UBarbara Ann Scott : "I-Canada's sweetheart"
U-Tenley Albright, umfazi wokuqala waseMerika ukuphumelela igolide le-Olimpiki ukuze afake i-skating
U-Peggy Fleming , udade weendaba kunye ne-superstar yokuqala
UDorothy Hamill, onobomi bakhe kunye nobuntu bakhe bafumana iintliziyo kwihlabathi lonke ngelixa ephumelele igolide le-Olimpiki
UDebi Thomas, olahlekelwa yigolide kodwa waba ngumdumi wokuqala waseMelika e-Winter Olympics. Emva kohambo olufutshane, uTomas waya esikolweni sezokwelapha ukuze abe ngugqirha wamazinyo.
UKatarina Witt, i-East German skater owayephethe loo mdlalo kwaye wayethandwa njengengcali yezokhenketho
UNancy Kerrigan, uTonya Harding no- Oksana Baiul : Umyeni kaTonya Harding kunye nabahlobo bakhe balimaza ngamabomu u-Nancy Kerrigan, umkhwenkwezi wakhe. I-Kerrigan yavunyelwa ukuba ibambe iqela kwiqela le-Olimpiki nakuba ilahlekile izilingo, kodwa i-Ukrainian Baiul ikhutshwe kwigolide yeOlimpiki idlulileyo.
UTara Lipinski kunye noMichelle Kwan , abaphiswano ngo-1998, xa i-Lipinski igxeka iKwan ukuba ibe ngumlingisi omncinci kumcimbi.
Abesifazane abaninzi babonisa i-skaters okufanele ukwazi, kuquka uKristi Yamaguchi , uNicole Bobek, uCarol Heiss
Ngezibini zokubhinqa, amaqabane abesilisa nabasetyhini badibanisa ukukhwabanisa kwabo, ngamanye amaxesha bakhanyisana, ngamanye amaxesha bazalisana. Abanye abesifazana babelana ngee-skaters kufuneka uwazi:
Ngowe-1976, ukudansa kweqhwa kwongezwa njengomdlalo we-Olimpiki, ngokugxininisa ekudeni kunye nobugcisa kunye nokugxininiswa kwamanani athile kunokugqithisa ukukhwela. Abanye abafazi abadansa beqhwa kufuneka uwazi:
Ukuqhutyelwa kwe-skating yamadoda kwongezwa kwi-Olimpiki yaseHlabathi ngo-1924, kwaye ukhuphiswano lwabafazi besantya se-Olimpiki zoMncintiswano we-Olimpiki luye lwafika ngo-1960
Abanye abesetyhini bakhawulezisa iinqweqhankqalazi zokuloba kufuneka uwazi:
UCarol Heiss Jenkins
Inqaku likaJone Johnson Lewis, iNkcazo yeNkcubeko yamaBhinqa.
ICleopatra: Mfazi Wamandla
Sappho waseLesbos Igalari yeSithombe
Quyrie Chapman Qut Quotes
U-Amy Kirby Post: I-Quaker i-Abolitionist ne-Women
Kutheni AbaPristile bamaKatolika bembethe i-Purple ngexesha lokufika?
Igalari yeSithombe seMpahla eziPhambili ezi-10 ezisebenzisiweyo zika-2008
I-Mercury e-Aries - iMercury Signs
I-Pacific University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
10 Amazwi malunga neLagomorphs
Ukuqonda ukungaxhaswa kweeNkcazo kunye nendlela yokuziCwangcisa
Indlela yokusebenzisa i-Shien yaseJapan yeLizwi
Iingoma ezi-5 zeepiyano zeentliziyo eziphukileyo
I-LDS Umsebenzi Wembono: ii-Hollywood Squares
Iingcebiso zokudala Imibuzo eFanayo yokuHlola